ခေါ်ရန် @ + 91-993.702.7574 | Odisha အတွက်လှည့်လည်အော်ပရေတာအနိုင်ရရှိမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုချီးမြှင့်ကနေသင့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ခရီးသွားအထုပ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
Namaskaar!... နှင့်သခင် Jagannath.Bhubaneswar ရာပြည်မှမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏ - ဘုရားကျောင်း၏မြို့, ၏မြို့တော် Odisha ငါ့အမိသည်။ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်, ဗိသုကာအမွေများနှင့်က hidden ကျောက်မျက်နှင့်အတူကြွယ်ဝပြည့်စုံ Odisha, အိန္ဒိယ၏ဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်။ အဆိုပါခမ်းနားဘုရားကျောင်းသည်အထင်ကရအထင်ကရအဆောက်အ, အ captivating shorelines, အစွန့်စား ဘေးမဲ့တော နှင့်အမျိုးသားဥယျာဉ်များ, Chilika အိုင်မှာပြောင်းရွှေ့အမွေးတောင်များသတ္တဝါများတသမတ်တည်းမြောက်မြားစွာဧည့်သည်များအတွက်ထားပါတယ်။ ငါတစျလောကလုံးဤအလှတရားဖော်ထုတ်လိုခြင်းနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုမှာ Odisha အတွက်လှည့်လည်အော်ပရေတာအနိုင်ရရှိမှုကိုအကောင်းဆုံးဆုကို၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
ငါသည်ငါ့ကလေးဘဝနှင့်အတွေ့အကြုံရှိဒုက္ခကနေကျယ်ပြန့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အပန်းဖြေသို့မဟုတ်ဧည့်သည်တစ်ဦးစုရုံးအားပေးနိုင်ကြောင်းအပြည့်အဝစကေးအောင်မြင်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်။ ငါတို့သည်, နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအားထုတ်မှုများနှင့်အလုပ်ကြိုးစားသူတွေအများကြီးအားဖြင့်ငါတို့သည်ယခုဆုကို Odisha အတွက်လှည့်လည်အော်ပရေတာအနိုင်ရရှိမှုရှိကြ၏။ ဂုဏ်ယူစွာပြောနိုင် ငါ့ "အိပ်မက်ကလေး" သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် 'n' Travels (ငါ) Pvt Ltd မှဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၌ငါ့အတွေ့အကြုံနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှု spotlight.With သို့ရောက်လာသည်ကား, ငါအရမ်းပြင်ဆင်ထား၏အုပ်စုတစုစုဝေးဖို့စွမ်းရည်သိမ်းယူသောအားဖြင့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် အများဆုံးစံပြခရီးသွားအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များပြင်ဆင်နိုင်ရန်လက်မှာမိမိတို့၏တာဝန်ထက် ကျော်လွန်. ကောင်းစွာသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့သူအတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်း။
ဒီနေ့နယူးဒေလီနှင့်ကာလကတ္တားမှကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတောင်ပံဖြန့်ဝေခဲ့ကြပြီး Odisha နှင့်အိန္ဒိယအစိုးရအဖွဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏အကူအညီ, အစိုးရနှင့်အတူကောင်းသောအလိုတော်နှင့်အတူအိန္ဒိယ၏ကွဲပြားခြားနားသော Metro အတွက်အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ Odisha အတွက်လှည့်လည်အော်ပရေတာအနိုင်ရရှိမှုတစ်ဆုချီးမြှင့်ဖြစ်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဆောင်ပုဒ်ခရီးသွားများအတွက်အတှေ့အကွုံတစ်သက်တာ, အမှတ်တရများနှင့်ပျော်ရွှင်မျက်နှာများနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်သေတ္တာများကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအတူကျွန်မတို့ရဲ့အံ့သြစရာများနှင့်ချစ်စရာကောင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန်နှင့်ယင်း၏အနက်ဆုံးသောထူးချွန်ကြုံတွေ့ရလူတိုင်းဖို့နွေးထွေးစွာကြိုဆိုထွက်တိုးချဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာဧည့်သည်များအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏မြင်ကွင်းများနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်မန်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးစဉ်းစားရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ငါ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်လင့်ထားသည်။ ငါက၎င်း၏အတွေ့အကြုံကိုရှေးပဝေအချိန်အဘို့မိမိတို့အမှတ်တရများတွင်နေရစ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့ကိုအာမခံချင်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏အပေါငျးတို့သသင်တို့ရှိသမျှအကောင်းဆုံးနှင့် Odisha ၌သင်တို့ကိုကြိုဆိုပါတယ်တွက်ဆထားကြောင်းသိရသည်။
Atithi Devo Bhava!... ။
MD, သဲကျောက်စရစ် Tours မှ